दिल्लीले आज अंकतालिकामा अन्तिममा रहेको बैंगलोरको सामना गर्ने : सन्दिप खेल्ने सम्भावना उच्च – onlinekhelkhabar.com
दिल्लीले आज अंकतालिकामा अन्तिममा रहेको बैंगलोरको सामना गर्ने : सन्दिप खेल्ने सम्भावना उच्च
चैत्र २४ , अनलाईन खेलखबर ।। नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने आबद्द दिल्लीले क्यापिटल्सले आज आईपिएल अन्तर्गत आफ्नो छठौ तथा प्रतियोगिताको २० औँ खेलमा बिराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको रोयल च्यालेंजर्स बैंगलोरको सामना गर्नेछ ।
खेल एम चिन्नास्वामी रंगशालामा नेपाली समय अनुसार दिउसो सवा ४ बजेपछि सुरु हुनेछ । प्रतियोगितामा जित बिहिन रहेको बैंगलोर र दिल्ली बिचको खेल दुवै टिमका लागि उत्तिनै महत्वपुर्ण रहेको छ ।
लगातार ५ खेलमा पराजित भएको बैंगलोरलाई प्ले अफ पुग्न अब बाकी रहेका खेलमा राम्रो गर्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नु पर्ने देखिन्छ । भने नयाँ जोश र उमंङ्गको साथमा रहेको दिल्लीलाई पनि अबको खेल निकै महत्वपुर्ण रहेको छ ।
यता दिल्ली भनेपछि नेपाली समर्थकहरुलाई खास रहन्छ । कारण नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेको प्रदशन , सुरुवाती २ खेलमा बेन्चमै रहेका सन्दिपले यसपछि भने ३ खेलमा खेल्ने मौका प्राप्त गर्दै ४ विकेट लिईसकेका छन । सन्दिप राम्रो लयमा पनि देखिएका छन त्यसैले आज हुने बैंगलोर बिरुद्दको खेलमा दिल्लीले उनलाई अन्तिम ११ मा स्थान दिने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
Previous Postअल्ज़ारी जोसेफले बनाए आईपिएलमा नयाँ रेकर्ड ! खेलमा मुम्बईद्रारा हैदराबाद पराजित
Next Postदिल्लीले पहिले बलिङ्ग रोज्यो ! आजपनि सन्दिप अन्तिम ११ मा पर्न सफल